Faure Essozimna Gnassingbé Eyadéma (wuxuu dhashay 6 Juun 1966) waa siyaasad Togolese ah oo madaxweyne ka ahaa Togo ilaa 2005. Ka hor inta uusan qabsan xilka madaxweynaha, waxaa loo magacaabay aabihiis, Madaxweyne Gnassingbé Eyadéma, isaga oo ah Wasiirka Qalabka, Macdanta, Boostada, iyo Isgaarsiinta, isaga oo ka soo shaqeeyay. 2003 ilaa 2005.
Ka dib dhimashadii Madaxweyne Eyadéma ee 2005, Gnassingbé isla markiiba waxaa loo caleemo saaray Madaxweyne isagoo taageero ka helaya ciidanka. Shaki ku saabsan sharci ahaanshaha dastuuriga ah ee dhaxalka ayaa horseeday in culeys heer sare ah la saaro Gnassingbé, wuxuuna markii dambe iscasilay 25 Febraayo. Ka dib wuxuu ku guuleystey doorashadii madaxweynaha ee muranka dhaliyay 24 Abriil 2005, waxaana loo dhaariyey inuu noqdo Madaxweynaha. Gnassingbé ayaa mar labaad loo doortay sanadkii 2010.
Bishii Abriil 2015 doorashadii madaxweynenimada, Gnassingbé wuxuu ku guulaystay mar saddexaad, isagoo ka adkaaday ninkii sida weyn ula tartamayay, Jean-Pierre Fabre, oo u dhaxeeyay qiyaastii 59% ilaa 35%, sida ku cad natiijooyinka rasmiga ah.
Doorashadii madaxweynenimada ee Febraayo 2020, Eyadéma wuxuu ku guuleystay marki afaraad oo uu qabto xilka madaxweynaha Togo. Sida ku cad natiijada rasmiga ah, wuxuu ku guuleystay in yar oo qiyaastii ah 72% ee saamiga codadka. Tani waxay awood u siisay inuu ka guuleysto ninka sida aadka ah ula tartamayay, ra’iisul wasaarihii hore Agbeyome Kodjo oo heystay 18%.
Bishii Oktoobar 2021, Faure Gnassingbé wuxuu ka helay "HeForShe" kala -duwanaanshaha Haweenka UN Jimcihii siyaasaddiisa ku aaddan kor u qaadista haweenka, iyo sinnaanta jinsiga iyo sinnaanta, ayaa ku dhawaaqday bogga dawladda République Togolaise. HeForShe (Lui pour Elle) waa dhaqdhaqaaq midnimo oo caalami ah oo ay hormuud ka tahay Haweenka Qaramada Midoobay si loo helo sinnaan iyo sinnaan jinsi oo aad u weyn. Jamhuuriyadda Togo. HeForShe (Isaga Isaga) waa dhaqdhaqaaq midnimo oo caalami ah oo ay hormuud ka tahay Haweenka Qaramada Midoobay sinnaanta weyn iyo sinnaanta jinsiga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Faure_Gnassingbé&oldid=220063"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Oktoobar 2021, marka ee eheed 13:18.